Phantse wonke umntu ngokukhawuleza okanye kamva ufika kwisigqibo sokuthi ukutya akufanele kube nje okuhlwaya, kodwa kunempilo. Ngoku ukuba kukho iintlobo zeemveliso kwiimarike, kunokuba nzima ukukhetha kuzo ezifanelekileyo nezichanekileyo. Ngaphezu koko, abaninzi babo abavumi ukuphikisana. Enye into enjalo yintliziyo yesibindi. Ngakolunye uhlangothi, kuye kwathethwa ngokuphindaphindiweyo ukuba i-by-products - kunye nesibindi ngokukhethekileyo-ayikwazi ukuba yimveliso enomsebenzi, kuba isibindi esisebenza njengesihlunu, ukuqokelela i-toxin nokuhlambulula umzimba. Nangona kunjalo, oku akusiyo ingxelo efanelekileyo. Isibindi sesigodlo ngumkhiqizo onomsebenzi ongeyena nto engabangela ingozi ukuba isibindi sithathwe kwiintlanzi ezintsha. Kodwa eziyimfuneko kwimpilo yezinto ezisesibindi ziqulethe ixabiso elikhulu. Umxholo wendaba yethu yanamhlanje "Iipropati ezifanelekileyo ze-cod yesibindi".
Okokuqala, isibindi sesigodlo ngumthombo oyintloko wolu hlobo luncedo kwaye luyimfuneko, njengeoli yeentlanzi. Ubuncinane i-66% yale mveliso icutswa kwisibindi seentlanzi zentlanzi. Iqule inani elikhulu le-polyunsaturated fatty acids i-Omega-3, kunye namavithamini A kunye noD, nazo zifumaneka kwioli yeentlanzi. Ioli yeentlanzi kunye nesibindi se-cod zisetyenziselwa ukukhusela izifo ze-rheumatoid kunye nezifo ezidibeneyo. Kuyaziwa ukuba izifo ezidibeneyo zidla ngokudibanisa nokubonakala kweenzyme ezitshabalalisa. Kwibindi yesigodlo, kukho izinto ezonakalisa le enzymes.
Ukutya kwesibindi yesibindi kukuthintela eso sifo njengesifo se-asthma, kwaye sinokunceda nesifo sikashukela kunye nesifo se-hepatitis.
Esinye sezixhobo ezinobuncedo zesibindi sesigodlo kukuba kunceda ukunciphisa umngcipheko wesifo senhliziyo. Iimpawu eziqulethwe kule mveliso zandisa ukwanda kweembande zegazi, ezivimbela ukubunjwa kwee-cholesterol plaques kwimida yegazi, oko kuthetha ukuba umngcipheko we-atherosclerosis uncitshiswa kakhulu. Ukunciphisa izinga le-cholesterol yegazi kubaluleke kakhulu kubantu abaphakathi kunye nabantu abadala, kuba ngeli xesha iimpawu zokuqala zezifo zesifo kunye nezifo zentliziyo zenzeka, kodwa abantu abancinci akufanele bakulibale ngokukhusela. Ukutya kwesondlo sesibindi kudlalwa ukuba isifo sesifo senhliziyo kunye ne-myocardial infarction.
Lo ngumkhiqizo onomsebenzi ongaqhelekanga ochaphazela ngokuthe ngqo umsebenzi wengqondo, uphucula ukuhamba kwegazi, kwaye uqinisa inkqubo yesantya. Ukongeza kwisondlo sakho sesibindi se-cod, unokuhlala usebenza kwaye ujabule ixesha elide kwaye ungakhumbuli ngokuguga ixesha elide. Ingxenye yesibindi iqulethe imimiselo yansuku zonke yezixhobo ezincedo ezifunekayo emzimbeni womntu, kunye ne-vitamin A, equlethwe kule mveliso, iyincedo kakhulu kwimpilo yolusu, iinwele kunye namazinyo. Kwakhona kunomthelela ekuqhelweni kombono.
Ngokwahlukileyo, kufuneka kuqatshelwe inzuzo yokubandakanya ikhodi ekudleni kwesibindi kubafazi abakhulelweyo. Ukususela kwi-trimester yesibini ukuya ekupheleni kokutya, kuyacetyiswa ukuba usebenzise ioli ye-cod for the food. Oku akuyi kuxhasa kuphela umzimba womama wesikhathi esizayo kunye nazo zonke izinto eziyimfuneko, kodwa kuya kukhuthaza nophuhliso lweengcaphephe nokuqinisa umzimba. Ukufakelwa kwamafutha kuya kunceda ukunqanda ukuxinezeleka kwe-postpartum.
Indlela elula ukufumana isibindi sesigodlo kwifom ekhuniweyo, kodwa ngexesha elifanayo kunzima kunzima, kuba kunzima ukucacisa umgangatho wokutya okusemathinini kwimveliso. Funda ngokucophelela ukupakishwa: ungathengi iimpahla ezikhutshiwe ezenziwe kwizinto ezifakwe kwiqrikhi eziqingqiweyo, kulo mzekelo akaqhelekanga nje kuphela kodwa umgangatho uphela. Iipropati ezincedo kakhulu zigcinwa kwimveliso eyenziwe ngqo elwandle okanye ngokukhawuleza elunxwemeni. Kwimveliso yezinto ezirhwexisiweyo eziqingqiweyo, izinto eziyimfuneko zingekho.
Isibindi sesigodlo ngumkhiqizo owusizo kakhulu oqhelanisa ukusebenza kweenkqubo ezininzi zomzimba kunye nokuphucula umgangatho wobomi. Ungakulibali ukuyifaka ekudleni kwakho, akuyi kukukunceda kuphela ukuba ugcine impilo, kodwa uncede ukudibanisa itafile, ukwandisa isidlo sakho ngesidlo esitsha. Yongeza isibindi kuma-saladi, i-tartlets okanye usebenzise njengesitya esahlukileyo-nangaluphi na uhlobo oya kuwuqonda ngayo inzuzo yalo mveliso onomsoco kwaye unempilo, kuba ngoku uyazi zonke izinto ezixhamlayo zesibindi se-cod.
Ukutya okonyango kunye nokuxhamla ngokweqile
12 iindlela zokungadli ebusuku
Indlela yokukhetha iphunga eliqhumayo ngokuchanekileyo
Injongo - ithemba elihle kwihlabathi
Indlela yokwenza ukuba isikhumba sigqibelele: imithetho elula elula kunye nohlahlo lwabiwo-mali!
Ukuziphatha okukhohlisayo kwiintsapho zobudlelwane
I-Western Media: Kate Middleton ukhulelwe kwakhona
Abahlaziyi. Khetha ukhuseleko